Hordhac: Lyon vs Bayern Munich - Finalka Champions League Oo Caawa La Xaqiijinayo, Wacdaraha Munich, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey - Gool24.Net
Hordhac: Lyon vs Bayern Munich – Finalka Champions League Oo Caawa La Xaqiijinayo, Wacdaraha Munich, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey
Bayern Munich iiyo Lyon oo caawa foodda isku daraya garoonka Estadio Jose Alvalade, ayaa laga sugayaa in midkood uu finalka ugu tago PSG oo xalay RB Leipzig kusoo garaacday 3-0, iskaana xaadirisay finalka tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan.
Kooxda reer Germany ee Bayern Munich waxay wareeggii siddeedda kusoo xasuuqday Barcelona oo ay kusoo garaacday 8-2, laakiin Lyon ayaa iyaduba shaqo weyn soo qabatay waxaanay soo jiidhay Manchester City oo ay usoo dhiibtay 3-1.
Xataa ka hor intii aanay soo burburinin Barcelona, Bayern Munich waxay ka mid ahayd kooxaha sida weyn loogu saadaalinayo inay ku guuleysanayaan koobka Champions League ee xili ciyaareedkan, waxaanay saadaashu sii korodhay markii ay burburiyeen Barcelona.
Bayern oo tagta finalka isla markaana koobka ku guuleysata waxay noqon doontaa markii lixaad ee taariikhda ay koobka hanato, waxaana xili ciyaareedkan lagu daray buugga dhacdooyinka dunida kaddib siddeeddii gool ee ay hal ciyaar oo Champions League ah ka dhaliyeen.
Xili ciyaareedkan oo qaybtiisii hore ay ahaayeen kuwo dhibaataysa, waxa Bayern Munich ay waji kale yeelatay markii loo dhiibay xilkan tababare Hans-Dieter Flick, 19 kooxood oo isku dayay inay joojiyaan dhamaan kulamada tan iyo February 2019 ayaanay u suurtogelin, iyaga oo badiyey 24 ka mid ah 25kii kulan ee ugu dambeeyey.
Dhinaca kale, Lyon oo laba gool oo uu u dhaliyey Moussa Dembele oo beddel ku yimid 15kii daqiiqadood ee ugu dambeeyey iyo mid uu waqti hore saxeexay Maxwel Cornet, ayaa ka caawiyey inay qalbi jab ku ridaan Manchester City oo ku jirtay naadiyada koobka loo saadaalinayo.
Inkasta oo ay soo gaadheen semi-finalka, haddana Lyon kumay soo guuleysanin laba ciyaarood oo isku xiga tartanka Champions League intii ka dambaysay xili ciyaareedkii 2011-12 oo si is-xigta ay uga badiyeen Dinamo Zagreb iyo APOEL.
Wareeggii 16ka markii ay kusoo garaacday Juventus, waxay Lyon soo heshay kalsooni ay ku timid siddeeddii oo ay haddana kusoo tuntay Manchester City, waxaana iyagoo karti iyo xirfad ba isbidaya ay caawa ka hor tegayaan Bayern.
Marka la eego lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey, Lyon waxay soo guuleysatay saddex jeer oo aanay laba ka mid ahina isku xigin. Saddex guulood, laba laga badiyey iyo mid barbarro ayay soo haleen. Halka Bayern Munich ay dhamaan soo guuleysatay lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey.
Ciyaarta: Lyon vs Bayern Munich
Garoonka: Estadio Jose Alvalade
Wararkii ugu dambeeyey ee dhaawacyada iyo ganaaxyada labada kooxood
Bayern Munich waxa usoo laabtay difaaca Benjamin Pavard oo Isniintii tababarka si buuxa u qaatay, laakiin waxay u badan tahay in aanu boos heli doonin oo ay Joshua Kimmich iyo Alphonse Davies labada baalood ee difaaca ka ciyaari doonaan, halka Boateng iyo Alaba ay difaaca dhexe ku diyaarsan yihiin.
Kingsley Coman oo kursiga kaydka u fadhiyey Ivan Perisic waqti dambena soo galay ayaa ku riixaya tababare Hans-Dieter Flick inuu markan kusoo bilaabo.
Robert Lewandowski oo siddeed kulan oo isku xiga oo tartanak Champions League ee xili ciyaareedkan soo dhaliyey ayaa waxa hiigsanaya inuu soo qabto Ruud van Nistelrooy oo sannadkii 2003 sagaal kulan oo xidhiidh ah goolal soo dhaliyey iyo Cristiano Ronaldo oo sannadkii 2018 soo dhaliyey 11 kulan oo xidhiidh ah.
Lyon waxa xulashada koowaad u diyaarsan weeraryahanka ciyaartii Man City guusha ku hoggaamiyey ee Moussa Dembele, haddii ay taasi dhacdana waxa kaydka geli doona Karl Toko Ekambi.